AUKEY နားကြပ်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုနှစ်ခု Androidsis
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် AUKEY နားကြပ်နှိုင်းယှဉ်
ဒီနေ့မင်းတို့ယူလာပြီ တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ထက်။ နောက်ဆုံးတော့နွေရာသီရောက်လာပြီ၊ ပြီးတော့မကြုံစဖူးကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းတစ်ခုကြောင့်အိမ်မှာလပေါင်းများစွာ“ ချုပ်နှောင်ထား” ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးအပြင်မှာပျော်မွေ့နိုင်ပါပြီ။ ထိပါ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အားကစားကစား ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ထိုသို့ပြုနိုင်ပါလိမ့် ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂီတခံစား က AUKEY နှင့်အတူပင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
AUKEY လို့လူသိများတဲ့ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဆီကနေသင့်ကိုယူလာပေးမှာပါ နှစ်ခု TWS ကြိုးမဲ့နားကြပ် ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အသုံးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အရည်အသွေးမြင့်ကုန်စည် မြှင့်တင်ရေးတစ်ခုပါ ၀ င်သောအခြားတစ်ခု (သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်နှစ်ခု) ကိုကမ်းလှမ်းရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။
1 AUKEY EP-T20 နှင့် EP-T21
2 UKEY နားကြပ်ကိုနှစ်ချက်ဖြုတ်ခြင်း
3 ဒါကြောင့် AUKEY EP-T21 ဖြစ်ကြသည်
4 ဒါကြောင့် AUKEY EP-T20 ဖြစ်ကြသည်
5 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် AUKEY EP-T21 နှင့် EP-T20
6 AUKEY EP-T21 နှင့် EP-T20 ၏ "တာဝန်ခံအမှုပေါင်း"
AUKEY EP-T20 နှင့် EP-T21
ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ထားတယ် နှစ်ခု AUKEY မော်ဒယ်များ။ မတူညီသောကြိုတင်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုနှင့်အတူတူနီးပါးတူညီသောအရာကိုပေးနိုင်ပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ရှာနေတာက အသံကောင်း၊ ဖြတ်တောက်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိဘဲဆက်သွယ်မှု သင်၏နားကြပ်များကိုသင်နှင့်အတူလိုက်နိုင်ရန်လုံလောက်သည်၊ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးသည်အလွန်ကောင်းသည်။
ယခုမှာ ကန့်သတ်အချိန် သင်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်နားကြပ်ကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရနိုင်သည်။ သူတို့ကြာရှည်မခံလိုသည့်အချက်ကိုအသုံးချပါ။
U AUKEY EP-T21 ပရိုမိုကုဒ် ODBMDU9F ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
U AUKEY EP-T20 ပရိုမိုကုဒ် 8DY32DI2 ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
သို့သော်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စည်းကမ်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသောအရေးကြီးဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည့်အချက်ကို အခြေခံ၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ပါ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ချင်းစီကနေ။ ဤရွေ့ကား AUKEY ကိရိယာနှစ်ခု, EP-T20 နှင့် EP-T21, သူတို့ဟာကံကောင်းထောက်မစွာသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်အရည်အသွေးမြင့်နားကြပ်ကိုရှာဖွေနေသူအများစုကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမှာပါ.
ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမော်ဒယ်လ်နှစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ ၀ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ကြလို့လား၊ မကြည့်ရအောင် ပုံးတစ်ခုချင်းစီ၏အကြောင်းအရာ သိသာထင်ရှားတဲ့ခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အကွက်ထဲမ ၀ င်ခင်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက်ပေးပါ။ AUKEY သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်အတူ၎င်း၏နားကြပ်များကိုပြသသည် 100% ပြန်လည်အသုံးပြုကတ်ထူပြားကနေလုပ်သေတ္တာများ ၎င်း၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ "AUKEY နှင့်အစိမ်းရောင်သွားပါ". ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။,
ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းနိုင်ကြောင်းဘာမျှအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လည်းမမျှော်လင့်ပါ။ ငါတို့ရှိသည် charger ကိုအမှုပေါင်း အဘယ်သူ၏အတွင်းပိုင်း၌ရှိကြ၏ နားကြပ်။ အချို့ စာရွက်စာတမ်းများ အာမခံနှင့်အသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်။ The cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် ပုံစံ မိုက်ခရို USBအလွန်တိုတောင်းသောကေဘယ်လ်နှင့်အဟောင်းပုံစံ။ ပြီးနောက် ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား padss ။ ဘာမှပို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုမိုကုဒ်နှင့်အတူအမေဇုံတွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
ဒါကြောင့် AUKEY EP-T21 ဖြစ်ကြသည်
ငါတို့ရှာတယ် အသစ်က AUKEY ထံမှကွဲပြားခြားနားသောကြည့်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်ဒီနားကြပ်များတပ်ဆင်ထားသည် နားကြပ်နားကြပ်ပုံစံ"In-ear" ဟုလည်းခေါ်သည်။ ငါတို့သုံးနိုင်တယ် ရော်ဘာသုံးကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအထိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားနဲ့မထိုက်မတန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်။ အသံအတွေ့အကြုံကိုတိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသောအရာ။
သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် ကျနော်တို့ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုရှာဖွေထားတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာ elongated ခန္ဓာကိုယ်။ အောက်ဘက်သို့ထွက်နေသောအစိတ်အပိုင်းသည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း micro micro ကိုပါးစပ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။ တစ်ခုခု သိသိသာသာတယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုများအတွက်ကောက်ယူအသံတိုးတက်ကောင်းမွန်သည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် အသွင်အပြင်, အလားတူအကွာအဝေးချွေတာ AirPodsလူအများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာ၊ ကျနော်တို့အပြင်ဘက်တွင်ကြည့်ပါ အနားသို့မဟုတ်ခလုတ်မပါဘဲချောချောချောမွေ့မွေ့။ သံသယမရှိဘဲကောင်းသောဒီဇိုင်းအလုပ်။
အ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု နားကြပ်တစ်ခုချင်းစီ၏ဖြစ်ကြသည် ထိတွေ့။ အသံပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုဖြတ်သန်း။ ထိန်းချုပ်နိုင်သည် ရှေ့သို့သို့မဟုတ်နောက်သို့ခြေရာခံ. ခေတ္တရပ်နားသည် o ကစားသည် သီချင်းများ။ ဖြေရန် o ငြင်းပယ် ခေါ်ဆိုခနှင့်ပင်ငါတို့အသံလက်ထောက်မြွက်။ အားလုံး keystrokes သို့မဟုတ် "ထိ" ၏ထပ်တလဲလဲမှတဆင့်, ဒါမှမဟုတ်ရှည်လျားသော keystrokes မှတဆင့်။
ဒါကြောင့် AUKEY EP-T20 ဖြစ်ကြသည်
နားကြပ်အချို့တွေ့ပြီ "ခလုတ်" အမျိုးအစားအရွယ်အစားပိုများသည့်အကြောင်းအရာ။ နားအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းပါ သိသိသာသာသေးငယ်ခြင်းနှင့်ပုံသဏ္inာန်အတွက်ဝိုင်း။ အရာအားလုံးကပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးဘာမှနားမှမထွက်လာဘူး။
အခြားမော်ဒယ်နှင့်အတူမျှဝေပါ နားကြပ်ပုံစံ။ လူတိုင်းသည်ဤနားကြပ်များကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုအညီအမျှခံစားနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောရော်ဘာပြားများအရွယ်အစားကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။
ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းရှိပါတယ် အဆင်ပြေထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများ ကျနော်တို့ EP-T21 မော်ဒယ်နှင့်ဝသကဲ့သို့ရရှိနိုင်အတိအကျတူညီလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှာသော။ အခြားမော်ဒယ်လိုပဲဒီစစ်ဆင်ရေးဟာပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ Y သူတို့ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်အောင်ဖိအားပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အများကြီးပိုလက်တွေ့ကျသောခလုတ်နှင့်အတူရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပင် dislodged နှင့်လဲနိုင်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များထက်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် AUKEY EP-T21 နှင့် EP-T20
အပိုင်း နားကြပ်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အမြဲအရေးကြီးတယ်။ ဘက်ထရီနှောင့်နှေးမှုဖြစ်စေနိုင်သောနားကြပ်ကိုမည်သူမျှမလိုချင်ပါ။ TWS နားကြပ်တွေကကျွန်မတို့ကိုစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြိုးတွေကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ အခုဘက္ထရီပိုကောင်းလေပိုကောင်းလေလေ၊ သူတို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုတာကိုလုံးဝမေ့သွားတယ်။
မော်ဒယ် AUKEY EP-T21 ထဲမှာဘက်ထရီရှိပါတယ် အမှုအားသွင်း 380 mAh သူတို့တက်ပူဇော် လေးအပြည့်ဘက်ထရီအားသွင်း နားကြပ်၏။ The နားကြပ် တစ်ဘက်ထရီရှိသည် 40 mAh တစ်ခုချင်းစီတစ်ပစ် အထိ5နာရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အပေါ်မှီခိုနိုင်ပါတယ် ပြန်ဖွင့် 25 နာရီ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစရာမလိုဘဲဂီတ။
အ AUKEY ET-T20အရွယ်အစားသေးငယ်ပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီတပ်ထားတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို နားကြပ် တစ်ဝန်ရှိပါတယ် 86 mAh ဘက်ထရီ, အ "အမှုကိစ္စစွဲချက်" ရန်စွမ်းရည်ရှိပါတယ် 400 mAh ဘက်ထရီ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာအခြားမော်ဒယ်ထက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အနည်းငယ်ပိုရှိသည်၊ ၎င်းသည်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးအမြတ်များညီမျှမှုကိုရင်ဆိုင်ရသောအခါမျှတမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
AUKEY EP-T21 နှင့် EP-T20 ၏ "တာဝန်ခံအမှုပေါင်း"
ဤတွင်လည်းငါတို့ရှာပါ သိသာထက်ပိုကြီးစွာသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု တ ဦး တည်းနှင့်အခြားမော်ဒယ်အကြား။ နှစ် ကွဲပြားခြားနားပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုသဘောတရားများ သူတို့နှစ် ဦး စလုံး။ The EP-T21 စတုဂံပုံသဏ္forာန်များအတွက်ရွေးချယ်သည် နားကြပ်ကိုဖြတ်ကူးဘယ်မှာ rounded ထောင့်နှင့်အတူ။ သေတ္တာကြီးတစ်ခုမလိုဘဲသူတို့အတူတကွကိုက်ညီရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ EP-T20s များသည်အသားအရေကိုတုပသည့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘဲဥပုံပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။
နှစ် ဦး စလုံးရှိသည် မိုက်ခရို USB အားသွင်းဆိပ်ကမ်း နောက်ဘက်ကပါ ပြီးတော့သူတို့ကိုအခြားအရာတစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားရန်၊ အဆိုပါ AUKEY EP-T20 ၏ဘဲဥပုံအမှု သေးငယ်တယ် elastic လက်ကိုင် အခြားမော်ဒယ်ရှိသည်ပါဘူးကြောင်း၎င်း၏ကြီးစွန်းတ ဦး မှာ။
ပုံစံ EP-T21 EP-T20
ဆက်သွယ်မှု ဘလူးတုသ် ၅.၀ ဘလူးတုသ် ၅.၀
ပုံစံ နားထဲမှာ နားထဲမှာ
ထိတွေ့ခလုတ်များ SI SI
ခုခံခြင်း IPX4 IPX5
နားကြပ်ဘက်ထရီ 40 mAh ဘက်ထရီ 86 mAh ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီအမှုအားသွင်း 380 mAh ဘက်ထရီ 400 mAh ဘက်ထရီ
အားသွင်း connector ကို မိုက်ခရို USB မိုက်ခရို USB
အရွယ် X ကိုက x 11 7.8 4.8 စင်တီမီတာ X ကိုက x 13.5 10.9 5.1 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် 40.8 ဂရမ် 68 ဂရမ်
စြေး 39.99 € 39.99 €
ဝယ်ယူ link ကို ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုဒ် ODBMDU9F 8DY32DI2
ဤသုံးသပ်ချက်မှ Aukey နားကြပ်ကိုသင်ကြိုက်လား။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကို ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားနေပါကယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရနေမည် သင့်မှာအထူးလျှော့စျေးရှိသည် ရုံ Androidsis စာဖတ်သူကိုဖြစ်ခြင်းအဘို့။ နားကြပ်တစ်ခုစီကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရန်အောက်ပါလျှော့စျေးကူပွန်များနှင့် ၀ ယ်ယူရန် link ကိုသုံးပါ။
? AUKEY EP-T21 ပရိုမိုကုဒ် ODBMDU9F ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
? AUKEY EP-T20 ပရိုမိုကုဒ် 8DY32DI2 ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် AUKEY နားကြပ်နှိုင်းယှဉ်
ဇူလိုင်လတွင် Galaxy A70 အတွက်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
၁၅ မိနစ်ကြာဂိမ်းများအတွက် PUBG Mobile အတွက်သီးသန့် Livik မြေပုံအသစ်ဖြစ်သည်